Beesha Caalamka “Galmudug Waa In Ay Wadahadal la Furtaa Puntland iyo Ahlu Sunna” – Goobjoog News
War saxaafadeed kasoo baxay Qaramada Midoobay, Urur Goboleedka Bariga Afrika ee IGAD, AMISOM, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Dowladda Mareykanka ayaa maamul goboleedka cusub ee Galmudug iyo dowladda federaalka looga dalbay in ay wadahadal la furan Puntland si loo xaliyo muranka ka dhashay arrinta soohdinta. Waxaa warsaxaafadeedka sidoo kale loogu baaqay Galmudug in ay wadahadal la furto dhinacyada wax tabanaya sida Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo kale.
Beesha Caalamka ayaa ugu baaqday Dowladda Somalia iyo Puntland in ay Xushmeeyaan heshiisyadii ay ku kala saxiixdeen Muqdisho iyo Garoowe, kuwaasoo la xiriira xuduudaha. Ayaa war lagu yiri war saxaafadeedka.
Dhinaca kale beesha caalamka waxa ay si weyn u bogaadisey doorashada madaxweynaha Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Carabeey, waxaana war saxaafadeedka lagu yiri